နှစ်သစ်မှာ ဆံပင်အရောင်အသစ်နဲ့ လန်းချင်တဲ့သူတွေအတွက် Tony Moly x Monsta X | CosmeticMyanmar
Myanmar’s Best Cosmetic Guide & Tips ──
Beauty Tips & Cosmetics News
Cosmetics by Category
Make Up (348)
Body Care (130)
Goods & Accessories (19)
Hair Care (86)
Hands and Nails (80)
Kits & Sets (21)
Oral Care (13)
Skin Care (328)
Tools & Devices (56)
သနပ်ခါး / Thanakha (6)
Home » Article » နှစ်သစ်မှာ ဆံပင်အရောင်အသစ်နဲ့ လန်းချင်တဲ့သူတွေအတွက် Tony Moly x Monsta X
နှစ်သစ်မှာ ဆံပင်အရောင်အသစ်နဲ့ လန်းချင်တဲ့သူတွေအတွက် Tony Moly x Monsta X
နှစ်သစ်ရောက်ပြီဆိုတော့ New Year, New Me လို့ပြောကြသလို New Year, New Hair လုပ်ချင်ကြတဲ့ ပျိုပျိုတို့ ကိုကိုတို့လည်းရှိကြမှာပေါ့။ ဒါဆိုရင်တော့ နှစ်သစ်နဲ့အချိန်မီ မိတ်ဆက်ပေးလိုက်တဲ့ Tony Moly x Monsta X ရဲ့ ပစ္စည်းအသစ်လေးကို ပြောပြချင်ပါတယ်။
ဒီ ပစ္စည်းလေးရဲ့နာမည်ကတော့ Personal Hair- Color blending treatment ဖြစ်ပြီးတော့ အရှေ့တွေမှာမင်မင်ပြောပြခဲ့ဖူးတဲ့ Get It liptint လိုမျိုး Monsta X အဖွဲ့နဲ့ပေါင်းပြီးထုတ်လုပ်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ Color blending treatment ဖြစ်တာမို့ ဆံပင်ပျက်စီးမှာကြောက်လို့ ဆံပင်မဆိုးရတဲ့သူတွေအတွက်တော့ သတင်းကောင်းပါ၊ ဘာလို့လဲဆိုတော့ ဆံပင်ကိုမထိခိုက်စေပဲ ပိုပြီးတောင်ကောင်းစေဖို့ color treatment ပုံမျိုးလေးထုတ်ထားတာကြောင့်ပါပဲ။ Treatmemt မှာ Damage Care လည်းပါဝင်တာမို့ ပျက်စီးနေတဲ့ဆံသားတွေအတွက်ပါ စိတ်ချလက်ချသုံးနိုင်တာပါတယ်။
Monsta X အဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့ပူးပေါင်းပြီးထုတ်ထားတာဖြစ်လို့ ဒီ color blending treatment မှာ member တစ်ယောက်ကို တစ်ရောင်စီနဲ့ အရောင် ၇မျိုးရှိပါတယ်။ ဒီအရောင်တွေနဲ့သူတို့ကို ကိုယ်စားပြုတဲ့ Monsta X အဖွဲ့ဝင်တွေကတော့-
၁။ စိမ်းပြာရောင် Green Blue by Shownu
၂။ အပြာရင့်ရင့် Ash Blue by Wonho
၃။ အစိမ်းရောင် Ash Green by I.M
၄။ အနီရောင် Cherry Red by Minhyuk
၅။ အညိုရောင် Dark Brown by Jooheon
၆။ ပန်းရောင် Peach Pink by Hyungwon နဲ့
၇။ ခရမ်းရောင် Ash Violet by Kihyun တို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။
အရောင်ထွက်တွေကတော့ လုံးဝပင်ကိုအနက်ရောင်ဆံပင်ပေါ်မှာဆိုရင်တော့ ပုံမှာပြထားတာလောက်တော့အရောင်မတောက်ပေမယ့် bleached လုပ်ထားတဲ့သူဆိုရင်တော့ ပြထားတဲ့အရောင်အတိုင်းထွက်ပါတယ်။ ကဲ ဒါဆိုရင်တော့ နှစ်သစ်မှာဆံပင်အရောင်သစ်နဲ့ လန်းချင်တယ်ဆိုရင် Tony Moly x Monsta X ရဲ့ color blending treatment ကိုအခုပဲ online ကနေ order လိုက်ရအောင်~
image references : http://tonystreet.com
Galaxy ကြယ်တန်းလေးတွေလို လင်းလက်နေစေမယ့် Pony Effect ရဲ့ Galaxy Lip Gloss
တရုတ်နှစ်သစ်ကူးအမှီ Luna New Year Edition ထုတ်လိုက်တဲ့ Becca ရဲ့ Highlighter
Tags: color blending treatmenthair colormonsta xpersonal hairTony Moly
သင်္ကြန်မှာအမိုက်ဆုံးမိတ်ကပ်စတိုင်နဲ့ အပြတ်လန်းနိုင်ဖို့ ပြင်ဆင်ခြယ်သနည်းများ
BECCA x Khloé Kardashian တို့ရဲ့ နှုတ်ခမ်းနီ လှလှလေးများ
နေရောင်ထဲထွက်စရာမလိုဘဲ Glow look လေးကို ပိုင်ဆိုင်စေဖို့ Becca ရဲ့ Soft Light Blurring Powder
ချောမွေ့တောက်ပတဲ့ Glow skin လေးကို ပိုင်ဆိုင်ဖို့ Loreal ရဲ့ Smooth & Glow Grapeseed Scrub
သဘာဝသစ်သီးနဲ့ ဖော်စပ်ထုတ်လုပ်ထားတဲ့ Loreal ရဲ့ Purify & Unclog Kiwi Scrub
Revlon ရဲ့ PhotoReady Candid™ Collection လေးမှာ ဘာတွေပါမလဲ?
CosmeticMyanmar ကတော့ 「ကိုယ်နဲ့လိုက်ဖက်တဲ့မိတ်ကပ်ပြင်ဆင်မှုဆိုတာဘယ်လိုမျိုးလဲ！」ဆိုတာကိုအဖြေရှာပေးနိုင်မယ့်ဝက်ဘ်ဆိုက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ အသစ်ထွက်ရှိတဲ့ အလှကုန်တွေနဲ့ Branded ပစ္စည်းတွေ၊ အလှပြင်နည်းတွေနဲ့ မိန်းကလေးတွေအတွက်အကြိုက်တွေ့စေမယ့် သတင်းအချက်အလက်တွေကို ဖော်ပြပေးသွားမှာပါ။ အမြဲတမ်း အသစ်အဆန်းလေးတွေတင်နေမှာမို့လို့ နေ့တိုင်းဝင်ရောက်စစ်ဆေးပြီး ပိုပိုလှ၊ ပိုပိုချစ်စရာကောင်းတဲ့သူလေးတွေဖြစ်နိုင်ကြပါစေနော် !
Blush Body Lotion Body Scrub and Massage Cleansing Comfortable Concealer Coverage Creamy Eyebrows Eyeliner Eye Shadow flawless Foaming Facial Cleanser Foaming Hand Soap Fresh Glow Hand Care Hand cream Healthy High Color Pigmentation Hydration Lightweight Liquid Foundation Long-lasting long-wear Matte Moisture moisturizer Moisturizing Natural Other Body Care Other Facial Cleanser Other Makeup perfect Protection Shine Silky Skin Care Smooth Soft Toner Treatment Waterproof နှုတ်ခမ်းနီ / Lipstick မိတ်ကပ်ဖျက်ဆေး / Makeup Remover
နေ့စဉ်သုံးအရောင်လေးတွေကြောင့် လူကြိုက်များနေတဲ့ The Balm ရဲ့ Eye Shadow Palette
မျက်နှာအသားအရေလေး ကြည်လင်စေဖို့အတွက် အိမ်တွင်းနည်လမ်းကောင်းလေး
နူးညံ့တဲ့ မျက်ဝန်းလေးတွေအတွက် Maybelline Snapscara!
NYX ရဲ့ Can’t Stop Won’t Stop Contour Concealer !!
ချစ်သူလေး သဘောကျမှာသေချာနေတဲ့ LUSH ရဲ့ Valentine’s Day Gift
ပစ္စည်းအားလုံး Sold Out ဖြစ်သွားတဲ့ Kylie ရဲ့ Valentine’s Day Makeup Collection
သဘာဝအတိုင်းလှပတဲ့ Make Up look လေးကို ပိုင်ဆိုင်နိုင်ဖို့ Maybelline Fit Me ရဲ့ Two Way Cake လေးရှိနေပြီနော်…
Valentines’ Day မှာ ရိုးရိုး ချောကလက်တွေထပ် ပိုပြီးရင်ခုန်ရစေမယ့် Etude House x Kit Kat
ဆယ်ကျော်သက်တို့ရဲ့ အသည်းစွဲ Kpop Idols တို့အကြိုက်ဆုံး ရေမွှေးများအကြောင်း (အပိုင်း ၂)
တောက်ပြောင်ပြီး ပုံကျတဲ့ ဆံသားလေးကို ခေါင်းလျှော်ပြီးပြီးချင်း ရရှိလိုပါသလား??
ပြည်တွင်းမှာလည်း ဝယ်ရလွယ်ပြီး အမှန်တကယ်အသုံးဝင်မယ့် Revlon ရဲ့ Colorstay Full Cover Foundation
လုံးဝ Sexy Pop Fanatic Vinyl Lip !!!
1 drop,2drops,3drops ပြစ်ချက်အားလုံးဖုံးသွားပြီ!!
Your feedback has been received. We will consider your feedback and try to improve our service.